Nagu saabsan - Hebei Finutra Biotech Co., Ltd.
Waxyaabaha Caanka Ah
Alaabada Nooc ahaan
Maskaxda & Xusuusta
Taageerada Wadajirka ah & Lafaha
Adeegga OEM & ODM
Finutra waxay u heellan tahay inay noqoto soo-saare isku-dhafan oo loogu talagalay silsiladda caalamiga ah, waxaan ku siineynaa noocyo badan oo ceyriin ah iyo maaddooyin shaqeynaya sida soo saaraha, qeybiyaha iyo alaab-qeybiyaha Beverage, Nutraceutical, Food, Feed and Cosmeceutical Industry.
Tayada, hirgelinta iyo raad raadinku waa tiirarka taageera saldhigga qaab-dhismeedkeenna iyo yoolalka aan higsaneyno. Laga soo bilaabo qorshaha illaa fulinta, xakamaynta, xiritaanka iyo jawaab celinta, howlahayaga waxaa si cad loogu qeexay heerarka warshadaha sare.
Waxaa la aasaasay 2005, Finutra Biotech waxay ku hawlanayd walxo cayriin ah oo ku saabsan wax soo saarka dhaqameedka Shiinaha sida shirkad aqoon u leh ISO. Sannadkii 2010, waxaan abaabulnay kooxda R&D oo aan ku kobcinay qaybaha wax soo saarka ee Microencapsulated Carotenoids taxane ah oo loo heli karo budo biyo qabow ah (CWS), beadlets iyo saliid ganaax / oleoresin si loo buuxiyo noocyo badan oo codsiyada sameynta ah. Sannadkii 2016 waxaan dhisnay Finutra Inc., waxaan dhisnay USA Warehouse. Adeeg guri ilaa albaab loo habeeyay laga bilaabo gram ilaa tannage ilaa gaarsiinta degdega ah oo buuxa lana buuxiyo baahida macaamiisha shaqsiyeed.
Khibradayada ayaa ah faa iidadaada, oo leh in kabadan 350,000-fiit oo laba jibbaaran oo wax soo saar iyo meel bakhaar ah, iyo sidoo kale qorshooyin balaarin oo sii socota, Finutra waxay hubineysaa inay u keeneyso heer sare oo tayo leh iyo adeeg macaamiisha loogu ixtiraamo badan adduunka.
Lambarka 904 Fortune Plaza, Degmada Chang'an, 050011, Hebei, Shiinaha